multivitamin & Probiotics & Montmorillonite - တရုတ် NCPCVET
multivitamin & Probiotics & Montmorillonite
multivitamin & Probiotics & Montmorillonite ဒီထုတ်ကုန်အစာကျွေးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးစံချိန်စံညွှန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံ: လိုင်စင်: ဂျီ Si Tian (2017) H01021 လိုင်စင်အရေအတွက်: ဂျီ Si Tian ဇီ ((2017) 124004 ကုန်ပစ္စည်းနျ Standard No.:Q/01HDB 03-2017 ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ရောနှောထားသော Feed အပိုဆောင်း-ဗီတာမင် D3 + ကယ်လ်ဆီယမ် propionate (TM1) ကုန်စည်ဒိုင်အမည်: ဟွာ Bei Tuo Mei Bao ကုန်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအာမခံတန်ဖိုးကို: ကီလိုဂရမ်ထုတ်ကုန်အကြောင်းအရာ Per: ဗီတာမင် D3 ≥ 200,000 IU သည်ကယ်လ်ဆီယမ် propionate ≥ 5G စို≤ 12.0% အာဆင်းနစ်≤10mg Aflatoxin B1≤10mg Ing ...
ထုတ်လုပ်မှု: လိုင်စင်: ဂျီ Si Tian (2017) H01021
လိုင်စင်အရေအတွက်: ဂျီ Si Tian ဇီ ((2017) 124004
ကုန်ပစ္စည်းနျ Standard No.:Q/01HDB 03-2017
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ရောနှောထားသော Feed Additional-ဗီတာမင် D3 + ကယ်လ်ဆီယမ် Propionate (TM1)
ကုန်စည်ဒိုင်အမည်: ဟွာ Bei Tuo Mei Bao
ဗီတာမင် D3 ≥ 200,000 IU သည်ကယ်လ်ဆီယမ် propionate ≥ 5G စို≤ 12,0%
အာဆင်းနစ်≤10mg Aflatoxin B1≤10mg
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: ဗီတာမင် D3, ကယ်လစီယမ် propionate, Saccharomyces cerevisiae ဆဲလ်နံရံ montmorillonite ။
ထုပ်ပိုး: 1kg / အိတ်
အင်္ဂါရပ်များ: ဗီတာမင် D3 ငယ်လေးအူထဲမှာကယ်လ်စီယမ်နှင့်ဖော့စဖောရက်၏ပုံမှန်စုပ်ယူမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ် propionate အခမဲ့ propionic အက်ဆစ်ထုတ်လုပ်အားဖြင့်အစာကျွေးခြင်းအနာတားဆီးနိုငျသော fungicide ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လစီယမ်၏တစ်ပြိုင်နက်ပြိုကွဲကယ်လစီယမ်နှင့်အတူတိရစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်နိုင်ပြီး, ဗီတာမင် D3 များ၏ပေါင်းစပ်ကယ်လစီယမ်စုပ်ယူမှုကိုနှင့်အသုံးချတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
ယင်းအစာကျွေးခြင်းအတွက် mycotoxins ခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူနိုင်ပြီးလျှင်မြန်စွာခန္ဓာကိုယ်မှပြန်ထွက်သွားသည်ကြသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Saccharomyces cerevisiae ဆဲလ်နံရံနဲ့ montmorillonite mycotoxins ပြိုကွဲခြင်းနှင့်စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောနိုင်ပါတယ်။
ဒီထုတ်ကုန်ဗီတာမင် D3 နှင့်ကယ်လ်စီယမ်ဖြည့်စွက်ခြင်း, အနာ, အနာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုသုံးပါ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပမာဏကိုဖြစ်ပါသည်:
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Life: ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝက 18 လဖြစ်ပါတယ်။
သိုလှောင်မှု: မှောင်မိုက်, အေးမြခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် Store မှာ။
ယခင်: multivitamin & Astragalus ဦးနှောက်အမြှေး Polysaccharide Additional Feed
နောက်တစ်ခု: Gamithromycin Injection Treat and control bovine respiratory disease in cattle and pigs
Cefquinome sulfate ဆေးထိုး
Kanamycin sulfate ဆေးထိုး
Injection သည် Benzathine penicillin Powder
ဗီတာမင် C ကအဲဒီပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ Powder
compound Sulfachlorpyridazine ဆိုဒီယမ် Powder